တန်ဖိုးကြီးမားလှတဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးနေတဲ့ မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ တို့ရဲ့Pre Wedding………. – Cele Oscar
တန်ဖိုးကြီးမားလှတဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးနေတဲ့ မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ တို့ရဲ့Pre Wedding……….
March 5, 2022 By L YC News
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ မောငျဖွဈသူ မောငျ နဲ့ သရုပျဆောငျ ရီရီပှငျ့ဖွူ တို့ကတော့ အနုပညာအလုပျတှေ ကို ရပျနားပွီးခြိနျမှ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဆုံတှပွေီ့း ဖူးစာဆုံ လကျထပျခဲ့ကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ မောငျနဲ့ ရီရီပှငျ့ဖွူတို့က အခုဆိုရငျ ခဈြသူသကျတမျး (၈) နှဈကြျော တိုငျရှိခဲ့ပွီဖွဈပွီး မကွာခငျအခြိနျအတှငျး မှာလညျး လကျထပျဖို့ ပွငျဆငျနကွေပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျထပျတော့မယျ့ ခဈြသူစုံ တှဲတှပေီပီ Pre Wedding ဓာတျပုံတှေ ရိုကျကူးဖွဈနတေဲ့ မောငျနဲ့ ရီရီပှငျ့ဖွူဟာ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ထူးထူးခွားခွားအနနေဲ့ နန်ဒာလှိုငျခငျပှနျး ကိုဇသေီဟ ရဲ့ ဇကေမ်ဘာပွတိုကျကွီးမှာ ဓာတျပုံ ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ ပိုပွီးထူးခွားတာကတော့ ရီရီပှငျ့ဖွူဟာ ဇကေမ်ဘာပွတိုကျကွီးထဲက ရှေးဟောငျးလကျဝတျတနျဆာတှေ ဝတျဆငျပွီး ရိုကျကူးခှငျ့ရရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
မောငျနဲ့ ရီရီပှငျ့ဖွူ ကတော့ “အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ ရှေးဟောငျး လကျဝတျလတျစားမြားကို ဝတျဆငျခှငျ့ပေးတဲ့ Zaykabar Museum ကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ။” ဆိုပွီး ကြေးဇူးတငျစကားပွောထားပါတယျ။ မောငျနဲ့ ရီရီပှငျ့ဖွူ တို့ကတော့ လူတကာဝတျဆငျခှငျ့မရရှိခဲ့တဲ့ ရှေးဟောငျးလကျဝတျလကျစားတှဝေတျဆငျပွီး အရမျးကကျြသရရှေိနတော ပရိသတျကွီးမွငျတဲ့ အတိုငျးပါပဲနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မောင်ဖြစ်သူ မောင် နဲ့ သရုပ်ဆောင် ရီရီပွင့်ဖြူ တို့ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ ကို ရပ်နားပြီးချိန်မှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆုံတွေ့ပြီး ဖူးစာဆုံ လက်ထပ်ခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့က အခုဆိုရင် ချစ်သူသက်တမ်း (၈) နှစ်ကျော် တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး မကြာခင်အချိန်အတွင်း မှာလည်း လက်ထပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ထပ်တော့မယ့် ချစ်သူစုံ တွဲတွေပီပီ Pre Wedding ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးဖြစ်နေတဲ့ မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူဟာ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ နန္ဒာလှိုင်ခင်ပွန်း ကိုဇေသီဟ ရဲ့ ဇေကမ္ဘာပြတိုက်ကြီးမှာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးထူးခြားတာကတော့ ရီရီပွင့်ဖြူဟာ ဇေကမ္ဘာပြတိုက်ကြီးထဲက ရှေးဟောင်းလက်ဝတ်တန်ဆာတွေ ဝတ်ဆင်ပြီး ရိုက်ကူးခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ ကတော့ “အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်း လက်ဝတ်လတ်စားများကို ဝတ်ဆင်ခွင့်ပေးတဲ့ Zaykabar Museum ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါတယ်။ မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ တို့ကတော့ လူတကာဝတ်ဆင်ခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းလက်ဝတ်လက်စားတွေဝတ်ဆင်ပြီး အရမ်းကျက်သရေရှိနေတာ ပရိသတ်ကြီးမြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲနော်။
မောင်လေးတစ်ယောက်လို ချစ်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ဆီ လက်ဆောင်ပေးပို့ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်…….